1510nm DFB Butterfly Fiber သည်လေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1510nm DFB Butterfly Fiber Laser Diode ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်
1510nm DFB Butterfly Fiber Laser Diode ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်
1510nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် DFB လေဆာ Diode သည် single mode optical fiber နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဖိုင်ဘာဖြစ်သည်။ CW output စွမ်းအားများသည်လှိုင်းအလျားမှီခိုပြီး 2mW နှင့် 20mW ကြားတွင်ရှိသည်။ 14-pin လိပ်ပြာတောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောဤလေဆာရောင်ခြည်များသည်မော်နီတာတွင်ပါသော photodiode၊ Peltier effect thermoelectric cooler, thermistor နှင့် optical isolator တို့ပါ ၀ င်သည်။ SMF-28 သို့မဟုတ် PM optical output ဖိုင်ဘာကို SC / PC, FC / PC, SC / APC သို့မဟုတ် FC / APC connectors နှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။
၁၅၁၀nm DFB Butterfly Fiber ၏အနှစ်ချုပ် Laser Diode
1510nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode သည်လေဆာရောင်ခြည်သုံးဒိုင်များဖြစ်ပြီးမောင်းသူနှင့်ခလုတ်မပါဘဲ။ ဤပုံစံရှိလေဆာရောင်ခြည်သည်လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကဲ့သို့သောဗို့အားကူးစက်မှုများ၊ ထို့ကြောင့်သင့်တော်သော power supply နှင့် mounts များကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သဟဇာတဖြစ်သောမောင်းနှင်မှု၊ mount နှင့် thermoelectric Controller များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလေဆာဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဏ္areတွင်ဖော်ပြထားသည်။
လေဆာရောင်ခြည် Diode 1510nm DFB Butterfly Fiber ၏နိဒါန်း
၃။ ထူးခြားချက်များ 1510nm DFB Butterfly Fiber တွဲ၍ လေဆာရောင်ခြည်
4. 1010nm DFB လိပ်ပြာအမျှင် Coupon Laser Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
CW 1510nm လေဆာအရင်းအမြစ်။
1510nm DFB လိပ်ပြာအမျှင် coupon လေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1508 1510 1512 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1510nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode
လေဆာရောင်ခြည်ကို 1510nm DFB Butterfly Fiber တွဲဖက်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1510nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
E-mail ကို: [email protected]ptronics.com